Osonkontileka Bophahla Queens
Real Estate Listings: » Business Directory » Construction Companies » US » New York » Long Island » Osonkontileka Bophahla Queens1
Abaninimabhizinisi banesibopho esikhulu, kusukela ekuphatheni ibhizinisi labo elixakekile kuya ekugcineni impahla yabo yezohwebo. Kungaba okweqile kwesinye isikhathi, ikakhulukazi lapho udinga ukulungiswa kophahla noma ukufakwa kophahla olusha. Ukuthola inkampani enhle yokuphahla kungaba yinkinga entsha kubaninimabhizinisi abanjalo. Silapha ukunikeza isisombululo sabo bonke abanikazi bamabhizinisi abanjalo! Amakhosikazi ethu enkampani yokufulela ezentengiselwano asebenzela amakhasimende ethu angabanikazi bebhizinisi. Asigcini ngokunikeza ngophahla lokuhlala kepha futhi sifulela ngohwebo futhi. Siyazi ukuthi njengoba izindlu ziyi-investimenti enkulu, kunjalo nangempahla yebhizinisi. Abanikazi bamabhizinisi kufanele babhekane namakhasimende usuku lonke futhi uma impahla ingazinzile noma iqine lapho-ke kungaba yinto enkulu ekhathaza umnikazi webhizinisi. Inkampani yethu ephahleni yezentengiselwano ibhekana nanoma yiziphi izingqinamba zokuphahla, ukufaka uphahla noma ukulungisa uphahla. Sinikezela ngokuhlolwa kophahla lokuhweba, ukunakekelwa, ukufaka okunye nokufaka. Uma kukhulunywa ngophahla lwezohwebo, kuhluke kakhulu kuphahla olujwayelekile njengoba luyisicaba kunokuba lubekiwe futhi ludinga ukunakekelwa okwengeziwe. Noma ngabe unendawo yokudlela, isitolo, ihhovisi noma enye indawo yokusebenza sizokusiza ekunikezeleni ngophahla olungcono kakhulu lwempahla yebhizinisi lakho. Abasebenzi bethu baqeqeshwe ngendlela yokuthi bazoqedela umsebenzi wabo ngesikhathi esisheshayo ukuze ibhizinisi lakho lingaphazanyiswa nganoma iyiphi indlela. Sivakashele manje 4349 10th St Suite 103C Long Island City, NY 11101 noma uxhumane nathi ku Ucingo: 718-819-7700 ukuthola izinsiza ezihamba phambili zokufulela ezentengiselwano. Iwebhusayithi: https://www.roofingcontractorsqueens.com
Ibhaliswe ku 26. Oct 2020
Xhumana nomkhangisi 718819xxxx
Ibhaliswe ku October 26, 2020
ILong Island (endaweni:) iyisiqhingi esinabantu abaningi engxenyeni eseningizimu-mpumalanga yezwe laseMelika laseNew York, enyakatho-mpumalanga ye-United States. Ethekwini laseNew York kungamakhilomitha acishe abe ngu-0.35 (0.56 km) ukusuka eManhattan Island futhi kunabela ngasempumalanga ngaphezu kwamakhilomitha ayi-160 ungene e-Atlantic Ocean. Lesi siqhingi sinezigodi ezine; Izifunda zaseKings neQueens (amadolobha aseNew York City eBrooklyn naseQueens, ngokulandelana) kanye neNassau County babelana ngengxenye yesithathu esentshonalanga yesiqhingi, kanti iSuffolk County ithatha izingxenye ezimbili kwezintathu ezisempumalanga. Abangaphezu kwengxenye yezakhamizi zaseNew York City bahlala eLong Island, eBrooklyn naseQueens. Kodwa-ke, abantu abaningi basemadolobheni amakhulu eNew York (ngisho naseBrooklyn naseQueens) basebenzisa igama elithi Long Island (noma isiQhingi) ukubhekisa kuphela eNassau naseSuffolk Counties, futhi ngakolunye uhlangothi, basebenzisa igama elithi iDolobha ukuthi lisho iManhattan kuphela. Ngokubanzi, i- "Long Island" ingahle ibhekise esiqhingini esikhulu naseziqhingini ezingaphandle ezingumngcele. Enyakatho yesiqhingi yiLong Island Sound, ngaphesheya kwayo kukhona iWestchester County, New York, kanye nezwe laseConnecticut. Ngaphesheya kweBlock Island Sound kuya enyakatho-mpumalanga nesimo saseRhode Island. Ngasentshonalanga, iLong Island ihlukaniswe neBronx nesiqhingi saseManhattan yi-East River. Ngaseningizimu-ntshonalanga eyedlulele, ihlukaniswe neStaten Island kanye nezwe laseNew Jersey yi-Upper New York Bay, iNarrows, neLower New York Bay. Ngasempumalanga kuneBlock Island — okuyingxenye yeSifundazwe saseRhode Island — neziqhingi eziningi ezincane. Kokubili isiqhingi eside kunazo zonke futhi esikhulu kunazo zonke e-United States, iLong Island idlulela ebangeni elingamakhilomitha ayi-190 ngasempumalanga ukusuka ethekwini laseNew York iye eMontauk Point, enebanga eliphakeme ukusuka enyakatho kuya eningizimu elingamakhilomitha angama-37 phakathi kweLong Island Umsindo nolwandle lwase-Atlantic. Njengoba inendawo engamakhilomitha-skwele angu-1,401 (3,630 km2), iLong Island iyisiqhingi se-11th ngobukhulu e-United States nesiqhingi se-149th ngobukhulu emhlabeni — sikhulu kunamakhilomitha-skwele angu-1,214 (3,140 km2) wezwe elincane kakhulu lase-US Ngenani labantu abalinganiselwa ku-7,869,820 elilinganiselwa ku-7,869,820 ngo-2017, elicishe libe ngama-40% wabantu baseNew York State, iLong Island iyisiqhingi esinabantu abaningi kunanoma isiphi isimo noma indawo yase-US, kanye nesiqhingi se-18th esinabantu abaningi emhlabeni ( ngaphambi kwe-Ireland, iJamaica, neHokkaidō). Ubuningi bakhona bungabahlali be-5,595.1 ngamakhilomitha-skwele (2,160.3 / km2). Uma indawo yaseLong Island ibiyindawo ezimele yezibalo zamadolobha amakhulu, ibizoba sesine ngobuningi babantu e-United States; ngenkathi bekungumbuso wase-US, iLong Island ibizobekwa endaweni yeshumi nantathu kubantu futhi iqale ngobuningi babantu. ILong Island inamasiko ahlukahlukene, inezindawo ezicebile kakhulu futhi ezibiza kakhulu eNtshonalanga Nenkabazwe ngasogwini kanye nezindawo zabasebenzi kuzo zozine izifunda. Njengesizinda sezindiza zezentengiselwano, iLong Island iyikhaya lezikhumulo zezindiza ezintathu ezimatasa kakhulu eNew York City, iJFK International Airport neLaGuardia Airport, ngaphezu kwe-Islip MacArthur Airport; kanye nezikhungo ezimbili ezinkulu zokulawulwa kwezindiza emoyeni, iNew York TRACON neNew York ARTCC. Amabhuloho ayisishiyagalolunye nemigudu eyishumi nantathu (kufaka phakathi imigudu kajantshi) axhumanisa iBrooklyn neQueens kwamanye amadolobha amathathu eNew York City. Izikebhe zixhuma iSuffolk County ngasenyakatho ngaphesheya kweLong Island Sound esifundeni saseConnecticut. ILong Island Rail Road isitimela esimatasa kakhulu sabagibeli eNyakatho Melika futhi sisebenza ngo-24/7. Abafundi bezikole eziphakeme zaseNassau County bavame ukuvelela njengabaphumelele kwi-Intel International Science and Engineering Fair kanye nemiklomelo yezifundo efanayo esekwe ku-STEM. Izinkampani ze-Biotechnology kanye nocwaningo lwesayensi ludlala indima enkulu emnothweni waseLong Island, kufaka phakathi nezikhungo zocwaningo eBrookhaven National Laboratory, eCold Spring Harbour Laboratory, eNew York Institute of Technology, ePlum Island Animal Disease Center, e-State University yaseNew York eStony Brook, eNew IYork University Tandon School of Engineering, iCity University yaseNew York, neHofstra Northwell School of Medicine.